कोच अल्मुताइरीले अचानक राजिनामा दिएपछि दुनियाँ चकित, फ्यानले गरे राजिनामा फिर्ता लिन आग्रह !
काठमाडौं : जारी साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलपछि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले राजीनामा दिने भएका छन् ।
बुधबार बंगलादेशविरु’द्धको खेलपछि पोस्ट म्याच कन्फ्रेन्समा बोल्दै अल्मु’ताइरीले आफूले एक महिनाअघि राजीनामा दिइसकेको र जारी साफको फाइनल खेलपछि आफू नेपालमा नरहने बताएका हुन् ।
‘मैले यसअघि नै राजीनामा दिइसकेको छु । फाइनल नेपालका लागि मेरो अन्तिम खेल हुनेछ । फाइनलपछि म नेपाल फर्कने पनि छैन ।’ प्रशिक्षक अल्मुताइरीले पछिल्लो तीन दिन आफूले केही नखाएको र सुत्न समेत नसकेको बताए र भने, ‘यी तीन दिन मैले धेरै तनावमा गुजारे ।’
प्रशिक्षक अल्मुताइरीले भने । उनले साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल भारतसँग पराजित भएपछि समर्थक र मिडियाले उनीमाथि गरेका टिकाटिप्पणीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । यसअघि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) का
पदाधिकारीसँग वि वा द भएपछि अलमुताइरीले फेसबुकमार्फत राजी’नामाको घोषणा गरेका थिए । तर पछि यो विषय सेलाएको थियो । नेपालका सबैभन्दा सफल कोचले अचानक राजिनामा दिएपछि नेपाली फ्यानहरु चकित परेका छन् । साथै उनिहरुले राजिनामा फिर्ता लिन पनि आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल पहिलोपटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा !
माल्दिभ्समा जारी साफ च्याम्पियनसिप २०२१ मा नेपाल फाइनल प्रवेश गरेको छ। बुधबार माल्दिभ्सको राजधानी मालेस्थित राष्ट्रिय रंगशालामा भएको खेलमा बंगलादेशलाई बराबरीमा रोक्दै नेपाल पहिलोपटक फाइनलमा पुगेको हो। नेपालले बंगलादेशविरू’द्ध दोस्रो हाफमा गोल गरेको थियो।
नेपालका लागि अन्जन विष्टले ८८ औं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत् गोल गरेका हुन्। बंगलादेशका सुमन रेजाले नेपालवि’रूद्ध खेलको नवौं मिनेटमा गोल गरेका थिए। बराबरीसँगै नेपालले चार खेलबाट ७ अंक जोडेको छ। दोस्रो स्थानको माल्दिभ्सको ६ अंक र तेस्रो स्थानमा भारतको ५ अंक छ।
अहिले राति ९:४५ बजे भारत र माल्दिभ्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। फाइनलमा पुग्न माल्दिभ्सलाई बराबरी भए पुग्छ भने भारतलाई जीत चाहिन्छ। यो खेलको नतिजापछि नेपालले फाइनलमा भिड्ने टिमको टुंगो लाग्नेछ।
नेपालले यसअघि खेलेका १२ संस्क’रणमा फाइनलमा स्थान बनाउन सकेको थिएन। त्यसैले नेपाली फुटबलका लागि यो ऐतिहासिक सफलता हो। फाइनल खेल आउँदो शनिबार नेपाली समयअनुसार राति ८:४५ मा हुनेछ।-ताजा खबर टिभी
२०७८ आश्विन २८, बिहीबार ०५:३८ गते 1 Minute 143 Views